Terminal ပြုပြင်ခြင်း OS X El Capitan ခွင့်ပြုချက်များ။ ငါက Mac ကပါ
Terminal မှ OS X EL Capitan တွင်ခွင့်ပြုချက်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ယမန်နေ့က Apple Utility တွင်ရရှိနိုင်သည့် Option ကိုပြသခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရေး option ကို။ ဒီရွေးချယ်မှုဟာလုံးဝတရားဝင်ပြီးနေ့စဉ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ Apple ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုတာကသိပ်မများပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါ ၀ င်တဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်နဲ့အမျှအထူးသဖြင့် Mac ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုစဉ်းစားစေတယ်။ လုံးဝချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းကိုစစ်ဆေးပြီးပြုပြင်ခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ ဤကိစ္စများတွင် First Help optional (သို့) Terminal ရှိ command များကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီနေ့ဒုတိယကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ.
ဒီအတွက် Terminal ကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးသုံးပြီးရရှိနိုင်ပါတယ် Launchpad> အခြားဖိုင်တွဲ> Terminal ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်ကနေရယူပါ မီးမောင်းထိုးရိုက်တာ Terminal။ ယခုဖွင့်သည်နှင့် disk များအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (verification) ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော command များနှင့်အတူသွားသည်။
အဆင့်များသည်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သို့သော် command line ပေါ်ရှိ double hyphens များကိုကြည့်ရှုရန်အထက်ပါ screenshot ကိုကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ terminal ဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ဒြပ်စင်နှစ်ခုနှင့်အတူ disk ကိုအတည်ပြုရန်ဤ command line ကိုကော်ပီကူးသည်သို့မဟုတ်ရေးသည်။
ငါမင်းကိုတောင်းလိမ့်မယ် သင်၏ Mac ၏စီမံခန့်ခွဲသူစကားဝှက်၊ သင်စာရိုက်သည့်အခါ cursor ၏ရွေ့လျားမှုကိုမမြင်ရလျှင်ပင်၎င်းကိုရေးချပါ။ ပြီးပြီအတည်ပြုပြီး disk ကို (သင်၌ဖိုင်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများများစွာရှိပါကစိတ်ရှည်ပါ) ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်သတိပေးပါလိမ့်မည်။
ခွင့်ပြုချက် "Library / Java" တွင်ကွဲပြားသည်။ drwxr-xr-x ဖြစ်သင့်သည်။ drwxrwxr-x ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူသည် private / var / db / displaypolicyd နှင့်မတူသည်မှာ0ဖြစ်ရမည်၊ သုံးစွဲသူမှာ ၂၄၄ ဖြစ်သည်။
အုပ်စုသည် "private / var / db / displaypolicyd" တွင်ကွဲပြားသည်။0ဖြစ်သင့်သည်၊ အုပ်စုသည် ၂၄၄ ဖြစ်သည်။
အခုငါတို့ထွက်သွားပြီ disk ကိုပြုပြင်လုပ်ဆောင်ပါ လိုအပ်ပါကဤစာသားလိုင်းကိုကူးယူခြင်းဖြင့် -
စိတ်ရှည်ရှည် ထား၍ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန်စောင့်ဆိုင်းပါ Mac ကနှေးနေလိမ့်မယ် disk ကိုစိစစ်အတည်ပြုနှင့်ပြုပြင်နေစဉ်။ သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားယူနစ်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုစစ်ဆေးသို့မဟုတ်ပြုပြင်လိုလျှင် ကျနော်တို့အသံအတိုးအကျယ်ကိုသတ်မှတ်ရန်ရှိသည် စာသားရဲ့အဆုံးမှာ "/" ပြောင်းလဲနေတဲ့။
တနည်းကား၊ မနေ့ကပြောခဲ့သလိုထပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အစမှာ၊ ဒီအလုပ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ရှင်းပြပြီးကတည်းကမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာရှင်းနေရမည်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သင်၏ Mac သည်ပုံမှန်အတိုင်းသို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရပ်တန့်လျှင် မင်းကိုပြproblemsနာတွေပေးတယ် ငါအရင်ကြိုးစားကြည့်သင့်တာက Repair Permissions ပြီးတော့ငါတို့ကအခြားရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » Terminal မှ OS X EL Capitan တွင်ခွင့်ပြုချက်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ Tim Cook နှင့်သူ၏ကျွမ်းကျင်သူများသည် hard drive နှစ်ခု (သို့) SSD နှစ်ခုဖြင့် RAID ကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အလုပ်များလုပ်သောအခါအရေးကြီးသည့်အရာများကို OS Cook မှဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
ထို command သည်အလုပ်မဖြစ်ပါ၊ သင်ကတိတိကျကျလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်အားပြောသောကြောင့်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုထည့်ရမည်။
script နှစ်ခုနှင့်အတူဖြစ်သော sudo / usr / libexec / repair_packages –verify –standard-pkgs /
…… ..repair_packages - လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရမည်။
ပျောက်နေတာကို text line ရဲ့ dash တွေတွေ့ရပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘလော့ဂ်မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပြီးကူးယူသောအခါ Terminal သည်၎င်းတို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပုံမရပါ
တုံးတိုနှစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းအာကာသမသုံးပါ။ - - verify - - စံ - pkgs - - volume /
Mac-Mini-de-Alberto-Blanco: ~ ABA $
ယခု… .sudo / usr / libexec / repair_packages - - verify - - standard-pkgs - -volume /
ငါပျော်တယ်! ငါ ^^ လိုင်းရဲ့အဆုံးမှာအသံအတိုးအကျယ်ချပြီးအားဖြင့်တော့ဘူး
အဆိုပါ post ကိုပြီးသားလည်းတည်းဖြတ်ပြီးအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
franctastic franctastic ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
Terminal မှ OS X El Capitan ခွင့်ပြုချက်ကိုစစ်ဆေးပါ
Terminal မှ OS X El Capitan ခွင့်ပြုချက်ကိုပြုပြင်ပါ
franctastic franctastic မှတုံ့ပြန်ပါ
အဆိုပါ script များ terminal ကို၌ရေးထားရမည်ဖြစ်သည်
သုံးကြိုးစားမှုပြီးနောက် OK ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါ script များနှင့်ပတ်သက်။ မှားခဲ့သည် ကောင်းပြီ၊ operating system ကခွင့်ပြုချက်တွေကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အတွက်၊ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာသူတို့ထဲကအတော်များများကိုပြုပြင်ပြီးပြီ။
Jordi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Snow Leopard နဲ့လုပ်ခဲ့သလိုခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြု / ပြုပြင်ပေးလိမ့်မယ်
Zhinyuu Marukez (@shinjumarkez) ဟုသူကပြောသည်
Apple Utility မှ Disk Utility မှခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်မှာအလွန်ဆိုးသည်။ ငါနင့်ကိုညွှန်ပြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါလည်းအစမှာ scripts တွေနဲ့ glitches တွေရှိခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အမှား (၅) ခုကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Zhinyuu Marukez (@shinjumarkez) ကိုစာပြန်သည်။
Francisco Huizar ဟုသူကပြောသည်
အမှားအယွင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏ hard disk ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲရန်တစ်ယောက်ယောက်ကရေးသားခွင့်ပြုသည်။ Terminal မှစာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအားတစ်စုံတစ် ဦး ကသာရေးသားရန်ရေးသားသည်။ အကယ်၍ သင်ကကျွန်ုပ်ကိုရှင်းပြပါက၊ ms2 နှင့်ဆင်တူသည်။ disk ကိုမဖတ်ရသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖန်သားပြင်အလွတ်သွားသည်
Francisco Huizar ကိုပြန်သွားပါ
အဆိုပါအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူကကျွန်တော့်အတွက် internal disk နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် external တစ်ခုက error message ကိုပေးတယ်။ ဒါကငါရတယ်။
sudo / usr / libexec / repair_packages –verify –standard-pkgs –volume ဖိုင်များ
ဒီ disk အတွက်မည်သည့် package ကိုမျှရှာမတွေ့ပါ
ကာရိုလိုင်းနား Kittler ဟုသူကပြောသည်
ပြုပြင်ခွင့်ပါမစ်များကို El Capitan မှပထမဆုံးအကူအညီတွင်မပါပါ။ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှစ်ခုမတိုင်မီကအဆင့်တစ်ခုတည်းလား။
Carolina Kittler အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြproblemနာကအာကာသနဲ့ hyphen ၂ ခုဖြစ်တယ်၊ ငါလက်နဲ့ရေးဖို့အကြံပြုလိုတယ်
OS မပါရှိသည့်အခြား disk များနှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
Gatekeeper ကို OS X Yosemite နှင့် OS X El Capitan တို့မှမနှိုးပါနှင့်